Caalamka, 25 January 2019
Khamiis 25 January 2019
Turkiga oo isku diyaarinaya inuu la wareego Manbij
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in milatariga Turkiga ay diyaar u yihiin in ay la wareegaan amaanka magaalada Manbij ee dalka Suuriya oo ay gacanta ku hayaan xoogaga Kurdiyiinta Suuriya ee gacanta ka helaya ciidanka Mareykanka.
Israel oo qiratay inay weerartay Syria
Qirasho naadir ah oo ay samaysay ayaa Israel waxa ay maanta ku xaqiijiysay inay duqeysay bartilmaameedyo Iran ay leedahay oo ku yaalla gudaha dalka Syria.
Dr. Cabdullaahi Xasan Mahdi oo lagu aasay Toronto
Myanmar: Saxafiyiinta Reuters oo ku guuldarreystay racfaan
Laba saxafi oo u shaqeeya wakaalada wararka Reuters oo ku xiran dalka Myanmar, ayaa maanta ku guuldarreystay racfaan ay ka qaateen xabsi 7 sana ah oo ay horay loogu xakumay.
Muran ka dhex oogan Turkiga iyo Mareykanka
Shirka Ganacsiga ee Shiinaha iyo Maraykanka
Shirkan oo Arbacadii shalay lagu soo gababeeyey magaalada Beijing ayaa la doonayey in loogu gogol xaaro heshiis buuxa oo labada dal ay ka gaaraan ismari-waaga dhinaca tacriifadaha ee labada dal ay isku soo rogeen.
Israel: Wasiir qirtay inuu basaas u ahaa Iran
Erdogan "lama aqbali karo hadalka Bolton"
Madaxweynaha Turkiga Reccep Tayyip Erdogan ayaa cambaareeyey hadal uu jeediyey la-taliyaha amniga qaranka Mareykanka John Bolton, oo ku saabsan maleeshiyada Kurdish-ka ee ka dagaalanta dalka Suuriya.